Senti Karama, Glass Karama, Ude na nfuli, Glass ite - mma nkwakọ
Roll na karama
Ịgba senti karama
Glass dropper karama
Tube kalama na okpu
Glass senti karama
Glass ude mmiri kalama na ite
Aluminum mgbapụta ude mmiri karama
Plastic mgbapụta ude mmiri karama
Acryli ude mmiri kalama na ite
Acryli ude ite
Acryli ude mmiri karama
Airless kalama na ite
Plastic karama na ite
Aluminum kalama na ite
Anyị mbukota ụzọ
Certificate nke ewetara
Welcome to Thunder Home!
Ịchọ mma nkwakọ ndú CHINA
Biko họrọ ziri ezi nhazi ọkwa, ma ọ bụ kpọtụrụ ndị ahịa na ọrụ na-ọmụma ị chọrọ.
Acryli kalama na ite
Anyị ụlọ ọrụ bụ a nnukwu oge a enterprise, tụnyere nnyocha sayensị, mmepe, mmepụta, ahịa na mgbe-sales.Since ọ bụ oruru, anyị anọwo na-eweta niile iche nke ngwaahịa na n'akụkụ ọ bụla nke ụwa, ma na ndidi ebe praised.Our Enterprise Culture Management n'ime anọ nkebi: nnyocha e mere nke enterprise omenala, enterprise ime mmụọ omenala ewu, enterprise akparamàgwà omenala ewu na enterprise image omenala ewu.
Thunder nkwakọ bụ a sara mbara ụlọ ọrụ nke integrates mmepụta, sourcing na ọrụ dị ka otu ihe dum. Anyị pụrụ iche na-amị senti na nlekọta anụ nchịkọta gụnyere senti karama, iko karama na ite, plastic karama na ite, airless karama na ite, acrylic karama na ite, na-akpatakwa sprayers, ude mmiri na nfuli, senti sprayers.
Anyị ụlọ ọrụ a na-ekewa n'ime anọ ngalaba: R & D, ahịa, ụlọ ọrụ mmepụta ihe na mgbe-sales.We nwere akwụkwọ echiche nke R & D, ndị ọkachamara na ndụmọdụ nke ahịa, elu mmepụta edoghi anyị factory na ịnụ ọkụ n'obi eje ozi nke mgbe-sales staff.We ga-anọgide na-hụ elu-edu ngwaahịa, ma na-agba mbọ ka n'ịkpụzi ụlọ ọrụ image, karịsịa na mkpara ọzụzụ, ka ha kasị ịnụ ọkụ n'obi na enyi na enyi na-emeso ọ bụla ahịa.
◆ Afọ ahụmahụ
◆ Advanced imewe
◆ iche iche nhọrọ nke ihe
◆ All ụdị ngwaahịa
◆ Product show ụlọ
◆ On Time 24 7
◆ Iche Iche asụsụ
◆ Multiple Nyocha
dị iche iche ngosi
Okwu: Rm.1202, NO.2, No.533 Anbo Rd, Yangpu, Shanghai, China